IDM new ~ မိုးညိုသား
1:44 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ) No comments
6:39 PM ညီနေမင်6းcomments
ကဲအောက်မှာ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကော မေးလ်နဲ့ပါ တောင်းထားတာတွေများလို့ လုပ်နည်းကို တစ်ခါတည်း video file နဲ့ပါ ရှင်းပေးထား ပါတယ်. အသံပါ ထည့်ပြီး ရှင်းထားတာဖြစ်လို့ နားလည် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. နောက်ဆုံး ထွက် version ပါပဲ. အောက်မှာ registration လုပ်တတ် တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ရှင်းပြချက်က လိုမယ်မထင်ပါဘူး. မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် software ကော tutorial movie ဖိုင်ကိုပါ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.
internet download manager 6.10.2 Software & patch
internet download manager 6.08.8 ကို registration လုပ်ပုံလုပ်နည်း video ဖိုင်